देउवाले तयार पारे उद्योग मन्त्रीको नाम, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
देउवाले तयार पारे उद्योग मन्त्रीको नाम, को हुन् उनि ?
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्तिको नाम तयार पारेका छन्। उनले बनाउने नयाँ मन्त्रीको नाम सार्वजनिक भएको छ। प्रम देउवाले सुनिलबहादुर थापालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाउने तयारी गरेका हुन्।
अहिले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि स्वयम प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन्। असोज २२ गते गैरसांसदको रुपमा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाईएको थियो । तर, उनले दुई दिन बित्न नपाउँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।हमालले राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि देउवाले आँफै सम्हालेका छन् ।
थापा सांसद भने छैनन् । सांसद नभएपनि संविधानतः ६ महिनाको लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । थापा यसअघि पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भैसकेका छन् ।उनको भारतसँग अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध छ । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा प्रभावित पार्नका लागि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएका हुन् ।
गजेन्द हमाललाई मन्त्री बनाएर स्वः शुशील कोइरालाका सुभचिन्तकलाई आक्रषण गर्न खोजेका देउवा असफल भएपछि राप्रपालाई हातमा लिन खोजेका हुन् ।उता, प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रकै केही नेताले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै लविङ गरिरहेका छन् ।
यसैगरि, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने अभियान सुरु गरेका छन्। आउने चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई १ नम्बर पार्टी बनाउछु भनेका प्रचण्डले त्यसका लागि मास्टरप्लान तयार पारेका छन् ।
विगतको समिक्षा गर्दै भविष्यका लागि शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् । उनले महत्वाकांक्षी योजनासहित आक्रामक रणनीतिहरु चाल्ने तयारी गरेका छन् । प्रचण्डले २०७४ को आमनिर्वाचनमा माओवादीले समानुपातिकतर्फ पाएको मतभन्दा झण्डै तेब्बर पार्टी सदस्य बनाउने रणनीति बढाइसकेका छन् ।
वडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्र, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म बढीभन्दा बढी जिम्मेवारी थपेर पार्टी सदस्यता बढाउने रणनीति बनाएका छन् ।प्रचण्डले पहिले संगठन विस्तार गर्दै लाने र अन्य शक्तिसँग पनि एकता वा चुनावी गठबन्धनको पहल थालिसकेका छन् । उनले विचार मिल्ने दल र समूहसँग एकता वा गठबन्धनको प्रस्तावहरु सारिसकेका छन् ।
३१ लाख पार्टी सदस्यता बनाउने, विचार र उद्देश्य मिल्ने शक्तिहरुसँग गठबन्धन मिलाउने रणनीतिका साथ बढेका प्रचण्डले अबको चुनावमा एक नम्बरको दल बन्ने दाबी गरेका छन् । अहिले झट्ट हेर्दा प्रचण्ड कमजोर देखिएका छन् ।तर, उनले शक्ति सञ्चय गर्दै बढेका छन् । यसले उनको महत्वाकांक्षी योजनामा साथ दिइरहेको छ ।
तेस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफू मुछिएको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशले पनि जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमालले पदबाट राजीनामा दिए पनि जनतालाई यथार्थ कुरा बताउनुपर्ने सिंहको भनाइ थियो।
उनले सरकार, सत्तारुढ दलभित्रका गठबन्धनका नेता र स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले पनि हमालको विषयमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बताए। बुटबल पुगेर एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले शेरबहादुर देउवाले गरेको गल्तीको स्पष्टीकरण नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुपरेको टिप्पणी गरे।
गल्ती सरकार विस्तारमा भयो अनि जवाफ चाहिँ हामीले दिनुपर्ने,’ उनले भने, ‘प्रचण्डजीले कांग्रेसले हो भनेर स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ, जनताले पत्याउनु प¥यो नि। यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश पनि विवादमा तानिएकाले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। नेता सिंहले प्रधानमन्त्री देउवालाई आफू प्रम हुँदा घटाएको आईजीपी काण्ड र प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा कांग्रेसले भोग्नु परेको नतिजा सम्झन पनि अनुरोध गरे ।
कांग्रेससँग २५ प्रतिशत सांसद नहुँदा पनि तत्कालीन प्रम केपी ओलीको विशेष निगाहले कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएको उनको भनाइ थियो ।फरक प्रसंगमा उनले मोतिपुर घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न माग गरे । गोली लागेर ४ जनाको ज्यान जानु दुःखद भन्दै उनले सरकारले मानव सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाए।
पैदल हिँडेर न्याय माग्न माइतीघर मण्डलामा आएकाहरुमाथि पुलिस लगाएको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले जनताको दुःखलाई वेवास्ता गरेको बताए।